श्रेष्ठको 'मध्यपहाड यात्रा' र सिंहको 'आधा गिलास खालि' सार्वजनिक
काठमाडौं, १५ फागुन । समाजवादी पार्टीका महासचिव गंगानारायण श्रेष्ठद्वारा लिखित यात्रा संस्मरण ‘मध्यपहाड यात्रा’ पुस्तक सार्वजनिक गरिएको छ ।
बिहीबार काठमाडौंमा आयोजिक कार्यक्रममार्फत् साङ्ग्रिला पब्लिकेशनले प्रकाशन गरेको उक्त पुस्तकलाई पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, सहअध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, राजनीतिक विश्लेषक उज्ज्वल प्रसाईं, लेखक सरला गौतमले विमोचन गरेका हुन् ।
तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीले २०७५ माघ १५ देखि फागुन १५ सम्म बैतडीको झुलाघाटदेखि पाँचथरको चिवाभन्ज्याङ्सम्म गरेको एक महिने जनसंवाद यात्रामा भोगेका अनुभूतिलाई महासचिव श्रेष्ठले पुस्तकको रूप दिएका हुन् । विमोचन कार्यक्रममा जनसंवाद यात्रामा घटेका घटना, भोगेका समस्या आदि विषयवस्तु पुस्तकमा समेटिएको विमोचन कार्यक्रमका जानकारी दिइयो ।
सोही अवसरमा कार्यक्रममा विशेष अतिथि डा. बाबुराम भट्टराईले कार्यक्रममा पार्टीका सूचना तथा सञ्चार विभाग प्रमुख प्रशान्त सिंहद्वारा निर्देशित आधा गिलास खालि वृत्तचित्र सार्वजनिक गरे । वृत्तचित्रमा जनसंवाद यात्राका क्रममा खिचिएका दृश्यहरु र भट्टराईको नयाँ राजनीतिक यात्राका बारेमा चर्चा गरिएको छ । वृत्तचित्रमा पनि बाबुराम भट्राई लगायतको टोलीले गरेको मध्यपहाड लोकमार्गको यात्रा, विभिन्न ठाउँमा गरेका कार्यक्रमको विषयहरु समेटिएका छन् ।
पुस्तक र वृत्तचित्रमाथि टिप्पणी गर्दै समाजवादीका सहअध्यक्ष श्रेष्ठले पुस्तक साहित्यिक दस्तावेजका साथसाथै राजनीतिक दस्तावेज पनि भएको चर्चा गरे । ‘पुस्तक नयाँ शक्ति पार्टी निर्माण हुँदाको संघर्षमा आधारित छ भने वृत्तचित्र समाजवादी पार्टी निर्माण हुँदाको अवस्थासँग सम्बन्धित छ,’ उनले भने ।
पुस्तकमाथि टिप्पणी गर्दै विश्लेषक प्रसाईंले समृद्धिको भाष्यलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने तर्क गरे । प्रसाईंले नेपाली राजनीतिमा चासो राख्ने व्यक्ति, विष्लेसक जो कसैले यो पुस्तक पढ्नुपर्ने बताए । पुस्तकमा एकजना सफल व्यक्तिको कथा पढ्न पाउने पनि उनले बताए ।
लेखिका तथा पत्रकार सरला गौतमले पुस्तकका विविध पक्षबारे चर्चा गरिन् । उनले भनिन्, ‘हामी मानिसहरुकहाँ सुन्न जाने, पुस्तकको सुरुमा नै लेखिएको छ । लेखनको सुरुमा नै लेखकले राम्रोसँग सुरुवात गरेका छन् । जनताकहाँ गएर जनताको कुरा सुन्न जानु एक राम्रो पक्ष हो, यसले मेरो मन छोयो ।’ उनले जनताको बीचमा गएर जनतासँगै खाने, बस्ने, जनताको समस्या सुन्ने क्रियाकलाप सकारात्क भएको बताइन् ।
यात्राका क्रममा मोबाइलमा टाइप गरेर लेखिएको पुस्तकले जनसंवाद यात्राका अनुभूति र राजनीतिक उद्देश्यबारे बुझ्न मद्दत पुर्‍याउने चर्चा गरे ।